हाम्राे पिपलबाेट » बिपी-माओ दुर्लभ वार्ता (पूर्ण पाठ) बिपी-माओ दुर्लभ वार्ता (पूर्ण पाठ) – हाम्राे पिपलबाेट
चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले ५८ वर्षअघि, १८ मार्च १९६० मा चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग भेटवार्ता गरे। भेटमा माओले चीनविरुद्ध संयुक्त सुरक्षा निर्माण गर्ने भारतको प्रस्तावमा नेपाल सहमत नहुँदा खुसी लागेको मात्रै बताएका छैनन्, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई काठमाडौं निम्त्याउने कोइरालाको प्रस्तावमा धन्यवाद पनि दिएका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको विवाद समाधान गर्न कोइरालाको अडानमा लचिलो पनि देखिएका छन्, माओ। बिपी र माओबीचको त्यो दुर्लभ वार्ता चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो पुस्तक ‘माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ मा प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा प्रस्तुत छ बिपी–माओ वार्ताको पूर्ण पाठको अनुवादः
अध्यक्ष माओत्सेतुङ: भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध खराब छ। तर चिन्ता नगर्नुस्। चाँडै यो समाप्त हुनेछ। हामी दुवैको साझा स्वार्थ छ, किनभने हामी दुवै अविकसित राष्ट्र हौँ। हामीले भारतमा आक्रमण गरेको भन्ने आरोप झुठो हो। हामी अर्काको जमिन एक इन्च पनि चाहन्नौँ। हामीसँग ९६ लाख वर्ग किलोमिटरको विशाल क्षेत्रफल छ। जसको ठूलो हिस्सा उपयोगविहीन छ। आफ्नो देश चाहिँ राम्ररी सञ्चालन नगर्नु अनि अरुको जमिन खोस्नु भनेको अपराध हो। के हामीले नेपालमा आक्रमण गरेका छौँ त? हामीलाई नेपालको जमिन एक इन्च पनि चाहिँदैन। के हामी सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सीमा चिन्ह राख्न सक्छौँ?
प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला: सक्छौँ। यसबारे मैले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँग छलफल गरेको छु।
माओः तपाईंहरुबीच सहमति भयो त?
माओः सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ। एक पटक सीमारेखा कोरेपछि गस्ती नगरिने क्षेत्र तोक्न सकिन्छ। सल्लाहमै दुवैतर्फ गस्तीमुक्त क्षेत्रको लम्बाई कायम गर्न सकिन्छ। भारत र पाकिस्तानबीच यस्तो सन्धि छ। तर दुवै देशबीच गस्तीमुक्त क्षेत्र एक किलोमिटर मात्रै छ। हामीले एक पटक भारतसँग त्यस्तो क्षेत्र २० किलोमिटर राख्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यो क्षेत्रमा न हामी जान्छौँ, न उनीहरु जानेछन्। तर उनीहरु सहमत भएनन्। तपाईं चाहनुहुन्छ भने गस्तीमुक्त क्षेत्रको प्रावधान सन्धिमै उल्लेख गर्न सक्छौँ। सीमाको दुवैतर्फ २०–२० किलोमिटर राख्ने हो भने जम्मा ४० किलोमिटर गस्तीमुक्त क्षेत्र बन्छ। त्यसरी नै १०, २० जतिपनि राख्न सकिन्छ। यो कुरा तपाईंको सुविधामा भर पर्छ। तपाईंको के विचार छ?
माओः तपाईं यसमा सोच्न सक्नुहुन्छ। यसको हेरविचार गर्ने काम दुवै पक्षका स्थानीय नागरिकहरुले गर्न सक्छन्। स्थानीयबाटै केही प्रहरी र मिलिसिया गठन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ औपचारिक सैन्य शक्ति राखिनुहुँदैन। यदि दुवै देशले आफ्नो सेनालाई सीमाक्षेत्रबाट टाढा राख्ने हो भने दुवै पक्ष सहज हुन सक्छन्। सीमा रेखा कोर्ने र गस्तीमुक्त क्षेत्र बनाउने कुरा सीमानामा शान्ति र मित्रता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। ताकि दुवै पक्ष आनन्दले बस्न सकून् र अर्कोले आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त रहन सकून्। तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीले बर्मासँग गरेजस्तै अनाक्रमण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सक्छौँ। सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको उल्लंघन गर्यौंभने हामी गलत हुन जान्छौँ। हामी ठूलो देश भएकोले तपाईंहरुले आक्रमण गर्ने आशंका हामीलाई हुँदैन। तर तपाईंहरुलाई त्यस्तो आशंका हुनसक्छ। सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई उल्लंघ गरे त्यो हाम्रो भयानक गल्ती हुनेछ।
बिपीः होइन। हामी दुई वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो राजमार्ग बनाउन चाहन्थ्यौँ। तर कोषको अभावका कारण काम अघि बढ्न सकेन। अहिले सोभियत संघका प्राविधिकहरुले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सर्वेक्षणमा सघाइरहेका छन्।
बिपीः मैले जवाहरलाल नेहरु र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई वार्ताका लागि हाम्रो राजधानी काठमाडौँमा निम्त्याएको थिएँ। तर उहाँहरु आउन सक्नुभएन।
माओः त्यस्तो किन भयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री उनकै राजधानी दिल्ली आउन् भन्ने नेहरुको चाहना थियो। पहिले हामीले रंगुनको प्रस्ताव गर्यौं तर नेहरु सहमत भएनन्। अहिले हामी दिल्ली जान सहमत भएका छौँ, त्यसैले उनी नेपाल जान सक्दैनन्। तपाईंको हार्दिकताका लागि धन्यवाद। तपाईंको अभिप्राय धेरै राम्रो छ। बर्माका प्रधानमन्त्रीको आशय पनि राम्रो थियो, जो चीन र भारतका प्रधानमन्त्री रंगुन पुगेको हेर्न चाहन्थे। तर जब नेहरुले यो कुरा आफूलाई सुविधाजनक नहुने बताए, त्यति सुविधा हामीले उनलाई दिनै पर्यो।
अहिले बर्माका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई रंगुन बोलाएका छन्। महामहिमले पनि आफ्नो देशमा बोलाउनु भएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ पहिले बर्मा जानुहुन्छ, अनि भारत गएर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईंको देशमा जानुहुन्छ। उहाँले यसपटक भ्रमण गर्ने चौथो देश चाहिँ कम्बोडिया हो, जसले हामीलाई अनेक पटक निम्ता गरिसकेको छ। उहाँ पाँचौँ देश पनि जानुहुन्छ, त्यो हो चि मिन्ह (हो चि मिन्ह भियतनाम कम्युष्टि पार्टीका संस्थापक हुन्, जो पछि भियतनामको निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भए) को देश हो। एकैसाथ पाँच देशको भ्रमण। त्यसैले गतवर्षको चीनविरोधी तरंग बिस्तारै शान्त हुँदैछ।
करिब एक वर्षजति भारतसँग हाम्रो झगडा भयो। तर हामी अझै पनि मित्र हौँ। साथीसाथी, पतिपत्नी र दाजुभाइबीच प्रायः झगडा भइरहन्छ। तपाईं, बर्मा, सिलोन (अहिलेको श्रीलंका) र कम्बोडियासँग हाम्रो झगडा छैन। संसारमा एक देशसँग मात्रै हाम्रो गम्भीर झगडा छ, त्यो हो- अमेरिका। उसले हाम्रो ताइवान कब्जा गरेर हामीलाई नै ‘आक्रमणकारी’ भन्छ। हामीले पनि उसलाई आक्रमणकारी भन्नुपर्छ। हामीले अमेरिकाको जमिन कहीँ एक इञ्च पनि कब्जा गरेका छैनौँ। यद्यपि चीन र होनोलुलुबीच मिडवे आइल्याण्ड छ। न त हामीले जापान नै कब्जा गरेका छौँ। मलाई थाहा छैन, हामी आक्रमणकारी कसरी भयौँ।
र अहिले एउटा देश छ, जो हामीविरुद्ध तपाईंहरुसँग ‘संयुक्त सुरक्षा’ निर्माण गर्न चाहन्छ। यसमा तपाईंहरु सहमत नभएको मैले थाहा पाएँ। यसबाट हामी आनन्दित भयौँ। चीन–भारतबीचको मुद्दा आपसमै सल्टिनुपर्छ र हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर तपाईंले भन्नुभयो। हामीले नेपालमा आक्रमण गरेको आरोप भारतले लगायो। तर तपाईंहरुले कुनै आक्रमण नगरिएको घोषणा गर्दै वक्तव्य निकाल्नुभयो। हाम्रो सेना तपाईंको देशमा घुसपैठ गरेको हल्ला छ। के कुनै घुसपैठ भएको छ त?
सोभियत संघ, अमेरिका र बेलायतसँग परिष्कृत विज्ञान र प्रविधि छ, हामीसँग छैन। हामीले उनीहरुबाट सिक्नु पर्छ। हरेक राष्ट्रका आआफ्ना सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन्। यही कुरा तपाईंको देश वा कम्बोडियामा पनि लागू हुन्छ। हरेक ठूला वा साना देशले अर्को देशको सबल पक्षबाट सिक्नुपर्छ। अन्य देशहरुसँग अनुभव साट्नु अत्यन्त राम्रो कुरा हो। हामी पूर्वीयहरुमा हीनताको भाव छ। हामी गोराहरुको सामुन्ने हीनताबोध गर्छौँ। यो त्यस्तो अन्धविश्वास हो, जसलाई तोड्न आवश्यक छ। यो अन्धविश्वास तोड्न पश्चिमबाट सिक्नजत्तिकै आवश्यक छ। अन्धविश्वास तोड्नुसँगै उनीहरुबाट सिक्नु विरोधाभाषी कुरा होइन। उदाहरणका लागि हामी उनीहरुको देशमा विद्यार्थी पठाउन र औजारहरु आयात गर्न सक्छौँ।
बिपीः प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँगको कुराकानीमा हामीले अनेकौँ सिद्दान्तको कुरा गर्यौं। पहिलो, परम्परागत रुपमा स्वीकार्य विद्यमान सीमा रेखा कोर्ने, दोस्रो, सीमाको दुवैतर्फबाट क्षेत्राधिकारीको व्यवहारिक परिस्थिति मूल्यांकन गर्ने, तेस्रो, केही स्थानमा विवाद समाधान गर्ने र विवाद समाधान हुन नसके संयुक्त समितिमा हस्तान्तरण गर्ने।
बिपीः हाल विवादित स्थानहरु तपाईंका लागि महत्वपूर्ण छैनन्। तर हाम्रो लागि ती महत्वपूर्ण छन्। यो प्रतिष्ठको विषय हो।
बिपीः हिमालको चुचुरो चाहिँ?
माओः त्यो पनि दुवै पक्षलाई आधाआधा। त्यसो गरे ठीक हुन्छ? यदि अहिले यो कुरा समाधान गर्न सकिन्न भने यो कुरालाई स्थगित गर्न सकिन्छ। यो निकै अग्लो छ र यसले हाम्रो सीमालाई सुरक्षा दिनसक्छ। हामीमध्ये कुनै पनि पक्षले हार बेहोर्नुपर्ने छैन। यो सबै तपाईंहरुलाई दिँदा हामी दुःखी हुन्छौँ। यो सबै हामीलाई दिँदा तपाईंहरु दुःखी बन्नुहुन्छ। हामी यसको शिखरमा सीमा रेखा राख्नसक्छौँ।
सूर्यप्रसाद उपाध्याय (गृहमन्त्री):: त्यो कसले गर्ने?
माओः साह्रै मुस्किल काम हगि! यसको लिखित अभिलेख राख्न सकिन्छ। हाम्रा मान्छेले तपाईंको तर्फबाट आरोहण गर्न लाग्दा हामी तपाईंहलाई सूचना दिनेछौँ, तपाईंहरुको मान्छे हाम्रो तर्फबाट आरोहण गर्दा तपाईंहरुले हामीलाई सूचना दिनुहुनेछ।
सूर्यप्रसाद उपाध्याय: विगतमा हिमाल आरोहीहरुले नेपाली भिसा लिनुपर्थ्यो।
पान जिली (भारत र नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत): विगतमा तिब्बततर्फबाट हिमाल चढ्न चाहनेले स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्थ्यो।
बिपीः ठीक छ। अन्य पाँच विवादित स्थान छन्। जसमध्ये तीन स्थान मुख्य छन्।
सूर्यप्रसाद उपाध्याय: प्रश्न भनेको एक माइल दक्षिणतिर वा एक माइल उत्तरतिर सीमा कोर्ने भन्ने हो।
माओः त्यसलाई समाधान गर्न गाह्रो छैन। जनसंख्य नभएको स्थानमा यसको समाधान गर्न सहज छ।
बिपीः बेइजिङको वार्तामा समाधान गर्न सकिएन भने यो कुरालाई हामी तपाईंसामु कसरी राख्न सक्छौँ?
माओः तपाईंले मसँग कुरा गर्नुपर्दैन। बरु प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँगको कुरालाई निरन्तरता दिनुहोस्। उहाँले तपाईंको देश भ्रमण गर्दा पनि तपाईं यो कुरालाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। टेलिग्राममार्फत् हामी सम्पर्कमा रहनुपर्छ। दुवै पक्ष संयुक्त समितिमार्फत् सहमतिमा पुग्नुपर्छ। यदि सहमत हुनुभएन भने तपाईंहरु जोड गर्नुहोस्। तपाईंले जोड गर्नुभयो भने हामी के गर्न सक्छौँ? के हामी युद्ध लड्न सक्छौँ त? हामी आशावादी छौँ।
माओः हामी तपाईंबाट मित्रता चाहन्छौँ। तपाईंहरु पनि हामीबाट मित्रता चाहनुहुन्छ। यो कुराको सार यही हो। यसलाई केन्द्रविन्दु मान्दा हरेक कुरा आफ्नो ठाउँमा रहन जान्छ। त्यसै होइन त?
बिपीः सूर्यप्रसाद उपाध्याय: हो।
माओः हामी आफ्नो मनस्थिति सहज बनाउन चाहन्छौँ, ताकि हामी चीनलाई आधुनिक उद्योग, कृषि, विज्ञान र राष्ट्रिय सुरक्षासहितको देश बनाउन सकौँ। तपाईंले पनि आफ्नो देशमा त्यस्तै गर्नका लागि सहज महसुस गर्न आवश्यक छ। यो राम्रो कुरा हो। होइन त?